Ukusilela okuqhelekileyo kwefayibha kunye nezisombululo zazo-Iindaba-Zhejiang Chaolian Electronic Co, Ltd
Okokuqala, nokuba ukukhanya kwesalathi se-transceiver ye-fiber ebonakalayo okanye imodyuli yefayibha ebonakalayo kunye nesibane sokukhanya kwesibuko esijijekileyo
Ukuba isibonisi seFX somkhuseli okhutshulweyo sicinyiwe, nceda uqiniseke ukuba ikhonkco lefayibha linxibelelene nomnqamlezo; isiphelo esinye sejusi yefayibha idityaniswe ngokufana; elinye icala lixhume kwimowudi enqamlezileyo. Ukuba isibonakaliso se-port (FX) se-A transceiver sikhona kwaye isibonisi se-port (FX) se-B transceiver sicinyiwe, isiphoso sikwi-A transceiver: enye into enokwenzeka kukuba: i-transceiver (TX) yokuhanjiswa kwezibuko Ibi, kuba izibuko elibonakalayo (RX) le-transceiver ye-B alinakufumana mqondiso we-optical; Enye into enokwenzeka kukuba: ikhonkco lefayibha ebonakalayo ye-transceiver transceiver ye-A transceiver (TX) inengxaki (ikhebula elibonakalayo okanye i-optical fiber jumper ingaqhekeka).
Isibonisi esiphambeneyo (TP) sicinyiwe, nceda uqiniseke ukuba unxibelelwano lwezibini ezijijekileyo alulunganga okanye unxibelelwano alulunganga. Nceda usebenzise uvavanyo lokuqhubekeka ukuvavanya; ezinye i-transceivers zinezibuko ezimbini ze-RJ45: (Ukuya kwi-HUB) ibonisa ukuba intambo eqhagamshela iswitshi ngumgca ohamba ngqo; (Ukuya kwiNode) ibonisa ukuba intambo eqhagamshela iswitshi yintambo ye-crossover; abanye abathumeli Kukho utshintsho lweMPR kwicala: oko kuthetha ukuba umgca wokudibanisa kumatshini ngumgca ohamba ngqo; Ukutshintsha kwe-DTE: umgca wonxibelelwano oqhagamshelwe kutshintsho ngumgca we-crossover.
Okwesibini, sebenzisa imitha yombane yokujonga
Amandla akhanyayo e-fiber optic transceiver okanye imodyuli ebonakalayo phantsi kweemeko eziqhelekileyo: imultimode: phakathi kwe -10db kunye ne-18db; Imodi enye engama-20 km: phakathi kwe -8db kunye ne-15db; imo enye ye-60 km: phakathi kwe -5db kunye ne-12db; Ukuba amandla akhanyayo e-optical fiber transceiver aphakathi kwe-30db-45db, emva koko kunokugwetywa ukuba kukho ingxaki kwi-transceiver.
Okwesithathu, ngaba kukho nayiphi na impazamo kwisiqingatha / kwimowudi yeduplex epheleleyo
Kukho utshintsho lwe-FDX kwicala labanye abagqithisi: oko kuthetha ukuba-yi-duplex epheleleyo; Ukutshintsha kwe-HDX: kuthetha isiqingatha sokuphinda kabini.
Okwesine, nokuba ngaba iintambo zefiber optic kunye nezixhumi zefayibha ziye zaphuka
a. Intambo ye-Optical on-off detection: sebenzisa i-laser flashlight, ukukhanya kwelanga, okanye isibane ukukhanyisa isiphelo esinye sesinxibelelanisi sentambo okanye isixhobo sokudibanisa; jonga ukuba kukho ukukhanya okubonakalayo kwelinye icala? Ukuba kukho ukukhanya okubonakalayo, kubonisa ukuba intambo yokubonakalayo ayophukanga.
b. Ukubonwa konxibelelwano lonxibelelwano lwefayibha: sebenzisa isibane selaser, ukukhanya kwelanga, njl. jonga ukuba kukho ukukhanya okubonakalayo kwelinye icala? Ukuba kukho ukukhanya okubonakalayo, kubonisa ukuba i-fiber jumper ayophukanga.